ch 25 မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 25 မဿဲ
25:1 "ထိုအခါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့အပျိုကညာဆယ်ကဲ့သို့ဖြစ်ရကြလိမ့်မည်, အဘယ်သူသည်, သူတို့ရဲ့မီးခွက်ယူပြီး, သတို့သားနှင့်သတို့သမီးတွေ့ဆုံရန်ထွက်သွားလေ၏.
25:2 ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကငါးမိုက်မဲခဲ့ကြ, ငါးယောက်သမ္မာသတိရှိသောခဲ့ကြ.
25:3 မိုက်မဲသောငါးအဘို့, သူတို့ရဲ့မီးခှကျကိုဆောင်ခဲ့ပြီးလျှင်, သူတို့နှင့်အတူရေနံမယူခဲ့ပါ.
25:4 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, သတိရှိသောသူမြားကိုရေနံမှနှုတ်ဆောင်, သူတို့ရဲ့ကွန်တိန်နာများအတွက်, မီးခွက်နှင့်အတူ.
25:5 သတို့သားနှောင့်နှေးခဲ့စဉ်ကတည်းက, သူတို့အားလုံးအိပ်ပျော်, ထိုသူတို့သညျအိပျပျြောခဲ့ကြ.
25:6 သို့သော်ထိုညဉ့်လယ်မှာ, အော်ဟစ်ထွက်သွားကြ၏: '' ကြှနျုပျသညျ, သတို့သားရောက်ရှိလာဖြစ်ပါတယ်. သူ့ကိုတွေ့ဖို့ထွက်သွားလော့။ ''
25:8 သို့သော်ထိုလူမိုက်တို့ပညာရှိကပြောပါတယ်, '' သင့်ရဲ့ရေနံကနေကျွန်တော်တို့ကို Give, ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးခွက်ငွိမျးလျက်ရှိသည်သည်။ ''
25:9 ဟုတုန့်ပြန်သတိရှိသော, '' ဖြစ်ကောင်းစိုးရိမ်စရာရှိ၏ကျွန်တော်တို့ကိုအဘို့နှင့်သင့်အဘို့အလုံလောက်ရှိပါတယ်မဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်စျေးသည်များကိုသွားနှင့်ကိုယ်အဘို့အချို့ကိုဝယ်ခြင်းငှါထိုသို့ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။ ''
25:10 ဒါပေမဲ့သူတို့ကဝယ်သွားစဉ်တွင်, သတို့သားရောက်ရှိလာ. ထိုအပွငျဆငျခဲ့ကြသောသူတို့သည်မင်္ဂလာဆောင်မှသူနှင့်အတူဝငျကွ, နှင့်တံခါးကိုပိတ်ထားခဲ့သည်.
25:11 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, အလွန်အဆုံးမှာ, ကျန်ရှိသောအပျိုကညာလည်းရောက်ရှိလာ, ဟုဆို, 'သခင်, သခင်ဘုရားသည်, အကြှနျုပျတို့အားဖှငျ့ပါ။ ''
25:12 ဒါပေမဲ့သူဟုဆိုသဖြင့်တုန့်ပြန်, '' အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်, ကိုယ်မင်းကိုမသိဘူး။'
25:13 ဒါကြောင့်သင်သတိရှိရမည်, သငျသညျနေ့ကိုဒါမှမဟုတ်နာရီမသိရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့.
25:14 ထိုသို့ရှည်လျားသောခရီးထွက် setting လူယောက်ျားကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူသည်သူ၏ကျွန်များဟုခေါ်တွင်သူတို့နှင့်ရန်သူ၏ဥစ်စာကိုအပ်.
25:15 ထိုအခါတသူငါးခွက်ကို ပေး., နှင့်အခြားနှစ်ဦး, သေးအခြားသူတဦးတည်းကိုပေး၏, သူ့ကိုယ်ပိုင်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းအသီးအသီးမှ. ထိုအခကျြခငျြး, သူထွက်မသတ်မှတ်.
25:16 ထိုအခါသူသည်ထွက် သွား. ငါးခွက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့, ထို၏အသုံးပြုမှုကိုဖန်ဆင်းတော်, သူကအခြားငါးရရှိခဲ့.
25:17 နှင့်အလားတူ, နှစ်ခုအခြားနှစ်ဦးကိုရရှိခဲ့လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့သူ.
25:18 ဒါပေမဲ့သူတဦးတည်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သူ, ထွက်သွားရာ, မြေကြီးတပြင်သို့တူး, သူသည်မိမိသခင်၏ပိုက်ဆံဝှကျထား.
25:19 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, အချိန်ကြာမြင့်စွာပြီးနောက်, သူတို့အားအစေခံကျွန်၏အရှင်သည်ပြန် လာ. သူသူတို့နှင့်အတူအကောင့်အသစ်များ၏အခြေချ.
25:20 ထိုမင်းသည်ချဉ်းကပ်ငါးခွက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သူအခါ,, သူနောက်ထပ်ငါးခွက်ကိုဆောင်ခဲ့, ဟုဆို: 'သခင်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုငါးခွက်ကိုအပ်. အကယ်, ငါနောက်ထပ်ငါးကတိုးမြှင့်ကြပြီ။ ''
25:21 မိမိသခင်ထံတော်ကပြောပါတယ်: 'ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်, ကောင်းမကောင်းသစ္စာစောင့်သောကျွန်သည်. သငျသညျအနညျးငယျသောအရာတို့ကိုကျော်သစ္စာရှိသောသူဖြစ်ရပြီကတည်းက, ငါအရာများစွာကိုကျော်သင်ခန့်ထားမည်. သင့်သခင်၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်သို့ထည့်သွင်းပါ။ ''
25:22 ထိုအခါသူသည်ချဉ်းကပ်လည်းနှစ်ဦးအခွက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့, နှင့်ဟုသူကဆိုသည်: 'သခင်, သငျသညျအကြှနျုပျကိုနှစျအခွက်ကိုအပ်. အကယ်, ကျနော်လည်းတခြားနှစ်ခုရရှိခဲ့ပါပြီ။ ''
25:23 မိမိသခင်ထံတော်ကပြောပါတယ်: 'ကောင်းစွာပြီးဆုံးသည်, ကောင်းမကောင်းသစ္စာစောင့်သောကျွန်သည်. သငျသညျအနညျးငယျသောအရာတို့ကိုကျော်သစ္စာရှိသောသူဖြစ်ရပြီကတည်းက, ငါအရာများစွာကိုကျော်သင်ခန့်ထားမည်. သင့်သခင်၏ဝမ်းမြောက်သောစိတ်သို့ထည့်သွင်းပါ။ ''
25:24 ထိုအခါသူတဦးတည်းအခွက်တဆယ်ကိုခံသောသူသည်, ချဉ်းကပ်, ကပြောပါတယ်: 'သခင်, ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ခက်သည်လူဖြစ်ကြောင်းကိုသိ. သငျသညျကိုကြဲကြပြီမဟုတ်ဘယ်မှာသင်အသီးအနှံကိုရိတ်ရ, သငျတို့သအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားကြပြီမဟုတ်ဘယ်မှာစုရုံး.
25:25 ဆိုတော့, ကြောက်လန့်ဖြစ်ခြင်း, ငါထွက်သွား၏နှင့်မြေကြီး၌သင်တို့အခွက်တဆယ်ကိုဝှကျထား. အကယ်, သငျသညျရင်းသင့်သောအရာကိုရှိသည်။ ''
25:26 သို့သော်မိမိအရှင်ကိုတုန့်ပြန်ကလညျး: '' သင်ကဘေးဥပဒ်နှင့်ပျင်းရိသောကျွန်! သငျသညျငါပျိုးကြဲကြပြီမဟုတ်ဘယ်မှာငါအသီးအနှံကိုရိတ်ရကြောင်းသိ, ငါအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားကြပြီမဟုတ်ဘယ်မှာစုရုံး.
25:27 ထို့ကြောင့်, သင်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ငါ့ပိုက်ဆံအပ်နှံသင့်, ပြီးတော့, အကြှနျုပျ၏ဆိုက်ရောက်မှာ, အနည်းဆုံးတော့ငါအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူမိုင်းသည်အဘယ်သို့လက်ခံရရှိလိမ့်မည်.
25:28 ဆိုတော့, ကွာသူ့ကိုမှအခွက်တဆယ်ကို ယူ. ဆယ်ခွက်ရှိပါတယ်သောသူပေး.
25:29 သူကလူတိုင်းအဖို့, ပိုပြီးအားပေးခံရကြလိမ့်မည်, သူကများစွာသောရကြလိမ့်မည်. ဒါပေမဲ့သူ့ထံမှမရသောသူ, သူရှိဟန်ပင်အဘယျသို့, သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်.
25:30 ထိုပြင်မှောင်မိုက်ထဲသို့ကြောင့်အချည်းနှီးသောကျွန်ပစ်ချ, ဘယ်မှာရှိငိုကြွေးခြင်း, အံသွားခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာလိမ့်မည်။ ''
25:33 And he shall station the sheep, တကယ်ပါပဲ, လက်ျာအပေါ်, but the goats on his left.
25:34 Then the King shall say to those who will be on his right: '' လာကြ, you blessed of my Father. Possess the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
25:37 Then the just will answer him, ဟုဆို: 'သခင်, when have we see you hungry, and fed you; thirsty, and given you drink?
25:39 Or when did we see you sick, or in prison, and visit to you?''
25:40 နှင့်တုန့်ပြန်, the King shall say to them, '' အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်, whenever you did this for one of these, the least of my brothers, you did it for me.’
25:44 Then they will also answer him, ဟုဆို: 'သခင်, when did we see you hungry, or thirsty, orastranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister to you?''
25:45 Then he shall respond to them by saying: '' အာမင်ငါသည်သင်တို့အားဆင့်ဆိုရမည်, whenever you did not do it to one of these least, neither did you do it to me.’